Ndị Hibru 12 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Akwụkwọ Ozi E Degaara Ndị Hibru 12:1-29
Jizọs bụ Nnukwu Onye Ndú nke okwukwe anyị (1-3)
Oké ìgwè ndị àmà (1)
Eledala ịdọ aka ná ntị Jehova anya (4-11)
Na-emenụ ka ụzọ unu na-aga na ya kwụrụ ọtọ (12-17)
Unu bịara Jeruselem nke eluigwe nso (18-29)
12 N’ihi ya, ebe ọ bụ na anyị nwere oké ìgwè ndị àmà a gbara anyị gburugburu, ka anyị tụfuo ibu arọ ọ bụla na mmehie ahụ nke na-ekegidekarị anyị.+ Ka anyị jirikwa ntachi obi na-agba ọsọ anyị na-agba,+ 2 ebe anyị na-elegidesi Jizọs anya ike, bụ́ Nnukwu Onye Ndú nke okwukwe anyị na Onye na-eme ka okwukwe anyị zuo ezuo.+ N’ihi ọṅụ a ga-eme ka o nwee n’ọdịnihu, o diri ọnwụ ọ nwụrụ n’osisi ịta ahụhụ,* o kweghịkwa ka ihere mee ya. Ọ nọdụla ala n’aka nri ocheeze Chineke.+ 3 N’eziokwu, chesienụ echiche ike banyere onye ahụ diri ụdị mkparị ahụ ndị mmehie, ndị mere onwe ha ihe ọjọọ, kparịrị ya,+ ka ike wee ghara ịgwụ unu, unu* adaa mbà.+ 4 Na mgba unu na mmehie ahụ na-agba, unu agbabeghị ya ruo na nke ịnwụ anwụ. 5 Unu echefuchaakwala ndụmọdụ ahụ Chineke nyere unu ka ụmụ ya, sị: “Nwa m, eledala aka ná ntị Jehova* na-adọ gị anya, adakwala mbà mgbe ọ na-abara gị mba; 6 n’ihi na ọ bụ ndị Jehova* hụrụ n’anya ka ọ na-adọ aka ná ntị. N’eziokwu, ọ na-apịa onye ọ bụla o weere ka nwa ya ihe.”+ 7 Unu kwesịrị ịna-atachi obi ma were ya na e si otú a na-adọ unu aka ná ntị.* Chineke na-emeso unu ka ụmụ ya.+ Ka è nwere nwa nna ya na-anaghị adọ aka ná ntị?+ 8 Ma ọ bụrụ na ọ dọbeghị unu niile aka ná ntị a, unu abụghị ụmụ ya n’eziokwu, kama unu bụ ụmụ onye ọzọ. 9 Ndị nna mụrụ anyị na-adị adọ anyị aka ná ntị, anyị na-akwanyekwara ha ùgwù. Ọ̀ bụ na anyị ekwesịghị ido onwe anyị n’okpuru Nna nke ji mmụọ nsọ ya họpụta anyị ka anyị wee dị ndụ?+ 10 N’ihi na ha na-adọ anyị aka ná ntị ruo obere oge otú ha chere dị mma, ma Chineke na-adọ anyị aka ná ntị ga-abara anyị uru ka anyị wee dị nsọ ka ya.+ 11 N’eziokwu, e nweghị ịdọ aka ná ntị na-eme mmadụ obi ụtọ mgbe a na-adọ ya onye ahụ, kama ọ na-ewute ewute. Ma e mechaa, ọ na-abara ndị e ji ya zụọ ezigbo uru. Ha ga na-eme ezi omume, obi eruokwa ha ala. 12 N’ihi ya, meenụ ka aka kụdara akụda na ikpere na-adịghị ike dị ike,+ 13 na-emekwanụ ka ụzọ unu na-aga na ya kwụrụ ọtọ,+ ka ebe na-esighị ike n’ahụ́ unu ghara ikwokapụ, kama ka a gwọọ ya. 14 Na-agbanụ mbọ ka unu na mmadụ niile na-adị n’udo,+ na-adịkwanụ nsọ+ n’ihi na mmadụ agaghị ahụ Onyenwe anyị ma ọ bụrụ na onye ahụ adịghị nsọ. 15 Na-elezinụ anya ka a ghara inwe onye ọ bụla n’ime unu na-agaghị enweta amara Chineke, ka mgbọrọgwụ ọjọọ ọ bụla ghara ipulite n’etiti unu ma kpata nsogbu, merụọkwa ọtụtụ ndị.+ 16 Leziekwanụ anya ka a ghara inwe onye ọ bụla n’ime unu na-akwa iko* ma ọ bụ onye ọ bụla na-ejighị ihe dị nsọ kpọrọ ihe ka Ịsọ, onye nyefere onye ọzọ ihe o kwesịrị inweta dị ka ọkpara ka o wee nweta otu efere nri.+ 17 N’ihi na unu ma na mgbe o mechara chọọ ka a gọzie ya, a jụrụ ya. N’agbanyeghị na ọ gbalịsiri ike ime ka ọ gbanwee obi ya,* anya mmiri agbaakwa ya,+ o nwetaghị ihe ọ bụla. 18 Unu abịaghị nso n’ihe e nwere ike imetụ aka,*+ nke ọkụ na-ere na ya,+ nke ígwé ojii na oké ọchịchịrị kpuchiri, nke oké ifufe na-efekwa na ya,+ 19 nke ụda opi si na ya na-ada,+ a na-anụkwa olu si na ya na-ekwu okwu.+ Mgbe ndị Izrel nụrụ olu a, ha rịọrọ ka a ghara ịgwa ha okwu ọ bụla ọzọ.+ 20 N’ihi na ha tụrụ ezigbo ụjọ maka iwu e nyere, sị: “Ọ bụrụgodị na ọ bụ anụmanụ zọrọ ụkwụ n’ugwu a, a ga-eji nkume tụgbuo ya.”+ 21 Ihe ha hụrụ dịkwa egwu nke na Mosis sịrị: “Egwu ji m, m na-amakwa jijiji.”+ 22 Kama, unu bịara nso n’Ugwu Zayọn+ nakwa n’obodo Chineke dị ndụ, bụ́ Jeruselem nke eluigwe,+ na ọtụtụ iri puku ndị mmụọ ozi ndị 23 zukọrọ n’ìgwè,+ bịakwa nso n’ọgbakọ ndị e bu ụzọ mụọ, bụ́ ndị e dere aha ha n’eluigwe, bịakwa Chineke nso bụ́ Onye na-ekpe mmadụ niile ikpe,+ bịakwa ndị ezi omume nso bụ́ ndị mmụọ nsọ na-edu,+ ndị e mekwara ka ha zuo okè.+ 24 Unu abịakwala Jizọs nso bụ́ onye ogbugbo+ ọgbụgba ndụ ọhụrụ,+ nakwa ọbara e fesara anyị, nke na-ekwu okwu otú dị mma karịa ọbara Ebel.+ 25 Hụnụ na unu na-ege onye ahụ na-ekwu okwu ntị. N’ihi na ọ bụrụ na a tara ndị na-egeghị onye ahụ dọrọ ndị mmadụ aka ná ntị* n’ụwa ahụhụ, o doro anya na a ga-atakwa anyị ahụhụ ma anyị gbakụta onye si n’eluigwe na-ekwu okwu azụ.+ 26 N’oge ahụ, olu ya mere ka ụwa maa jijiji,+ ma o kwere nkwa ugbu a, sị: “M ka ga-eme ọzọ ka ụwa na eluigwe maa jijiji.”+ 27 Ma okwu bụ́ “m ka ga-eme ọzọ” na-egosi na a ga-ewepụ ihe ndị e mere ka ha maa jijiji, bụ́ ihe ndị Chineke na-ekeghị, ka ihe ndị a na-emeghị ka ha maa jijiji wee dịgide. 28 N’ihi ya, ebe ọ bụ na anyị ga-eketa Alaeze a na-enweghị ike ime ka ọ maa jijiji, ka anyị na-ekwe ka amara Chineke baara anyị uru, nke anyị ga-esi na ya jiri egwu Chineke na-ejere ya ozi dị nsọ nke ọ na-anabata. 29 N’ihi na Chineke anyị bụ ọkụ na-erechapụ ihe.+
^ Ma ọ bụ “na-azụ unu.”
^ Ya bụ, ime ka nna ya gbanwee obi ya.
^ Ebe a na-ekwu banyere oge ndị Izrel gara nso n’Ugwu Saịnaị.
^ O nwere ike ịbụ, “onye Chineke si n’aka ya dọọ ndị mmadụ aka ná ntị.”